नारी नेपाली - कान्तिपुर समाचार
मेरी आमाका गुणहरूमध्ये एउटा सिलाइ, कटाइ र बुनाइ जान्नु पनि हो  । स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म सिलाइ मेसिनमा बसिरहनुहुन्छ  ।
उमेरले ६ दशकमा हिँड्दै गर्दा पनि प्रा.डा.चन्दा कार्कीको दौडधुप युवा अवस्था जक्तिकै सत्रिय छ  । घर र अस्पतालको दौडधुपले चटारो नै हुन्छ  ।
प्रेरणाका तीन रूप
कमलरीदेखि प्रदेश उपसभामुख
डरको अघि बन्जी !
सिन्धुपाल्चोक भोटेकोसीकी मीना श्रेष्ठ, २४ लाई ६ वर्षअघि ‘स्टोर किपर’ को काम पाउनु पनि ठूलो अवसर लाग्थ्यो  । उनी प्लस टु पढ्दै थिइन्  ।
'सधैं कति प्रश्न मात्रै ?'
तीन दशकअघि मोटरसाइकल मर्मत गर्नुका साथै त्यसका पाटपुर्जा बेच्ने काम रोज्दा मीनर्भा बज्राचार्यलाई हेरेर धेरैले अचम्म मान्थे  । अहिले त प्राविधिक गतिविधि वा शारीरिक बल पर्ने काममा महिलालाई कम आँकिन्छ भने तीस वर्षअघि कस्तो हुँदो हो ?
संघीय संसद्का दुइटा सदन प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका हरेक बैठकमा प्रवेश पाइरहेको एउटा विषय हो— कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या  । पन्तको हत्या भएदेखि अहिलेसम्मका करिब सबै बैठकमा कुनै न कुनै सांसदले आफ्नो बोल्ने पालोमा यो विषय प्रवेश गराउँछन्  ।
गाउँबाट पोखरा पढ्न आएका थुप्रै छात्रामध्ये तीन जनाको रहर अलि बेग्लै थियो  । घरको आर्थिक अवस्था सम्झेर उनीहरू आफ्नै खुट्टामा उभिन चाहन्थे  ।
पदयात्रा (ट्रेकिङ) हाइकिङ वा मर्निङवाक गरेजस्तो पक्कै हैन  । ‘हाई अल्टिच्युड’ (उच्च हिमाली) क्षेत्रमा हप्तौंसम्म हिँड्नु चुनौतीपूर्ण छ  ।